Shinoa 38 Tapitrisa Miala Amin’ny Fiantohana Fisotroan-dronono · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2013 22:47 GMT
Manodidina ny 38 tapitrisa ireo Shinoa nampitsahatra ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fiantohana ny fisotroan-drononony ny taona 2013, izay manome ny 10% mahery amin'ireo mpiasa izay nirotsaka tamin'ity programan'asa fiantohana fisotroan-dronono ity. Mampibaribary olana gavana amin'ny rafitra fisotroan-dronono ao Shina io isa io.
Araka ny vaovao avy amin'ny mediam-panjakana Shinoa, manodidina ny 30 tapitrisa ireo olona niala tamin'ny fiantohana fisotroan-dronono isan-taona nanomboka tamin'ny 2011. Ny antony ao an-damosin'ity fihenana goavana ity dia ny rafitra fiahiana ara-tsosialy.
Araka ny ambaran'ny rafitra fiahiana ara-tsosialy ao Shina, tsy misy na iza na iza afaka mamindra fandrotsahany ny fiantohana fisotroan-drononony hiala aminà faritany na tanàna iray ho aminà iray hafa. Araka izany dia maro ireo mpila ravinahitra no tsy maintsy nanapaka ny fiantohana fisotroan-drononon'izy ireo rehefa miverina mody any aminy.
Ny sasany milaza fa atsahatr'izy ireo ny fandrotsahany fandraisana anjara satria efa nanao ny fandrotsahany nandritra ny 15 taona izy, fetra farany ambany indrindra ahazoana zo hitaky fisotroan-dronono.
Efa nampitaraina foana nandritry ny taona maro ny rafitra fisotroan-dronono tao Shina satria marobe ireo Shinoa no mahita azy io ho tsy rariny sy tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Ohatra, ireo izay miasa amin'ny seha-panjakana dia tsy mandoa fandraisana anjara ao anatin'ny rafitra fisotroan-dronono. Ireo rehetra mpandoa hetra no mandoa ny fisotroan-drononon'izy ireny raha tokony ho izay vola narotsany avy any am-paosiny. Ny vola aloa amin-dry zareo anefa no midangana indrindra mitaha amin'ny an'ny rafitra fisotroan-dronono sosialy.
Manodidina ny 38 tapitrisa ireo Shinoa nampitsahatra ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fiantohana ny fisotroan-drononony ny taona 2013. Sary: Sina Weibo
Ny fahanteran'ny vahoaka ao Shina koa vao mainka manampy trotraka amin'ilay olana. Araka ny tatitry ny fikarohana iray nataon'ny Akademia Shinoa momba ny Siansa Sosialy, tany amin'ny faran'ny taona 2011 dia maherin'ny 2 lavitrisa RMB ao amin'ny kitapom-bolan'ny fisotroan-drononon'olon-tsotra no nafindra mba handoavana ny an'ireo efa nitsahatra sy nandeha hisotro ronono. Tamin'ity taona ity, marobe no nandà ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanemotra ny taona handehanana misotro ronono izay 60 ho lasa 65 taona mba hanentsenana ilay fahabangana ara-bola.
Niteraka ahiahy mikasika ny rafitra fisotroan-dronono teny anivon'ny vahoaka ilay isa 38 tapitrisa. Nalahelo i “Chen Yuandao”, mpisera ety anaty aterineto:
Raha tsoriko tsy misy olakolaka, fony nanomboka niasa aho, nanana hevitra (tsy handray anjara amin'ny resaka fisotroan-dronono). Sady izao koa, tsy itokisako ny governemanta. Betsaka ny olona antitra mitàha amin'ny tanora, miakatra be ny vidin-javatra, tsy resahana intsony ny kolikoly. Iza no mahalala hoe firy taona no mbola hananako aorian'ny fitsaharako amin'ny asa, ny hany fanirian'ny governemanta dia ny hahafohy andro anao
Mpisera iray hafa i “Liu Daniang” mitaky [zh] hanovàna ny rafitra fisotroan-dronono :
38 tapitrisa no nampiato ny fandraisany anjara amin'ny resaka fisotroan-dronono, tsy hadisoan-dry zareo izany fa an'ny governemanta. Andraman'ny governemanta ny hitaky amin'ny olon-sotra ny hamenoana ny banga amin'ny fanemorana ny taona itsaharana amin'ny asa. Tsy mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka mihitsy ny renivolan'ny governemanta, fa ireo vitsy an'isa ao anatin'ny rafitra ihany. Ny zava-misy hoe 38 tapitrisa no nampiato ny fandraisany anjara amin'ny fisotroan-dronono dia hanamora ny fanavaozana ny rafitra fisotroan-dronono sosialy.
Namorona kisary ny “Sina news” hampitahàny ny fandrotsahana fandraisana anjara amin'ny fisotroan-dronono sy ny fanaovana tahiry any amin'ny banky. Kanefa, ny Profesora Lang Xianping avy amin'ny Anjerimanontolon'i HK dia mino amin'ny fanindriana fa tsy fomba tsara ny fanaovana tahiry any amin'ny banky. Nampiditra ny rafitra fisotroan-dronono Amerikana izy ao amin'ny bilaoginy :
Raha ny marina dia niantso ny governemantantsika aho mba hiatrika ireo olan'ny fisotroan-dronono. Tsy tokony ho ny ivelany fotsiny ihany no hianarantsika avy amin-dry zareo Amerikana, fa mba hanakatra ny fanahy Amerikana. Tsy mametraka ny tahiry hitsinjovany ny fiainany any amin'ny banky ny Amerikana, fa any anatin'ireo fiahiana ara-ketra sosialy, drafitra 401K, ary kaontin'ny isam-batan'olona ho fitsinjovana ny fisotroan-drononony. “Apetrany” any amin'ny tsenam-bola amin'ny endriny telo ny volany any. Ohatrinona? Mitontaly 17,9 lavitrisa dolara Amerikana, in-1,19 avo heny amin'ny harin-karena faoben'ny Etazonia tamin'ny 2011. Volan'ny vahoaka Amerikana ilay tahiry, ka miasa mifampidimpiditra eo ilay fampiasàm-bola ao amin'ny tsenam-bola sy ilay tahiry. Arakaraky ny vola napetraka ao amin'ilay fisotroan-dronono, mitombo koa ny ao amin'ny tsenam-bola, mitombo araka izay koa ny fisotroan-dronono. Amin'io fomba io dia tena manana fahatsapàna fitoniana tokoa ry zareo Amerikana mikasika ny kitapom-bola ho amin'ny fisotroan-drononony.